मुलुक समृद्ध बनाउने भए पुँजी बजारको विकास गर्नैपर्छ : गभर्नर
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने पुँजी बजारको विकास हुनैपर्ने बताएका छन् । ‘पुँजी बजारको विकास नभई समग्र देश विकासको कल्पना गर्न पनि सकिंदैन,’ उनले भने । पुँजी बजार मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम भएको गभर्नर नेपालको भनाई छ । हाम्रो पुँजी बजारको आधुनिकीकरणका लागि अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । रियल सेक्टर नआएसम्म सेयर बजारको विकास र विविधीकरण सम्भव छैन । पर्याप्त नाफा कमाएका उद्योग, सेवा क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सक्नुपर्ने गभर्नर डा. नेपालले बताए ।
‘चाउचाउ, बियर, दूरसञ्चारलगायतका आकर्षक नाफा गरेका कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न सके कम्पनी त थप समृद्ध हुन्छ नै, यसबाहेक मुलुक र जनतालाई पनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको २४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि बन्ड मार्केट, म्युचुअल फन्ड, बजार निर्मातालगायत पक्षको पनि त्यत्तिकै विकास हुनुपर्ने बताए । नियामक प्रभावकारी भएमा पुँजी बजारमा अहिले देखिएका छिद्र हटाउन सकिने गभर्नरको भनाई छ । ‘मेरै पालामा सात वटा नियमावली पारित भएका थिए । एउटै व्यक्तिले हजारौं जनाको नाममा सेयर भर्ने बोरे प्रणाली अन्त्य गर्न बैंक खाताको प्रचलन सुरु गरिएको हो,’ उनले भने । सेयर बजारको विकास गर्न जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको गभर्नरको भनाई छ ।
गतिलो काम गर्ने भए नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्छ
कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामजी रेग्मीले पूर्णस्वचालित प्रणालीको विकास गर्न सकेमामात्र पुँजी बजार आधुनिकीकरण हुन सक्ने बताए । उनले सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले स्टक एक्सचेन्जले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको बताउँदै यसको निजीकरण गरिनुपर्ने बताए । एउटा सात करोडको सफ्टवेयर किन्न १५ ठाउँमा बयान दिन जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले स्टक एक्सचेन्जले अपेक्षा अनुसार बजार आधुनिकीकरणको काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘सीडीएसलाई त तत्काल निजीकरण गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गतिलो काम गर्न नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्छ ।’
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने, संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउनेलगायतका चुनौती रहेको बताए । पुँजी बजारको विकास गर्न नेप्सेले विभिन्न बजार सुधारका काम अघि बढाइरहेको उनको भनाई थियो । रियल सेक्टरलाई कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर नेप्सेले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।